အတက်ရောဂါ အဖြေရှာ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
Dr. ဒေါ်သန်းသန်းအေး (ပါမောက္ခ)
တက်တဲ့ရောဂါရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်အပြင်လွှာ (Cortex) မှာရှိတဲ့ အာရုံကြော (Neurones) တွေကနေ လှုံ့ဆော်မှု (electrical activity) တွေ ရုတ်တရက် လွန်လွန်ကြူးကြူးထုတ်လွှင့်လိုက်လို့ ဖြစ်တာပါပဲ။ ဒီလို အာရုံကြောတွေ တစ်ပြိုင်တည်းလှုံ့ဆော်လိုက်တာကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးရှိ ကြွက်သားတွေအားလုံးရုန်းပြီး ကျုံ့သွား စေပါတယ်။ လူတစ်ကိုယ်လုံး မလှုပ်ဘဲ တောင့်သွားပြီး သတိလည်း လစ်သွားတာကြောင့် ရုတ်တရက်ပစ်ပြီး လဲကျ သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီအခိုက်မှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိတတ်ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ တောင့်သွားချိန်မှာ လျှာကိုလည်း ကိုက်မိတတ်ပြီး ဆီးအိမ်မှာ ဆီးတွေလည်း ပေါက်ချလိုက်မိတတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အသက်ရှူရပ်နေလို့ အောက်ဆီဂျင် မရရှိဘဲ နှုတ်ခမ်းတွေ ပြာနှမ်းသွားပါတယ်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ ကြွက်သားတွေ ပြေလိုက်၊ ရုန်းလိုက်ဖြစ်နေတော့ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်တုန်ပြီးတက်နေတာ တွေ့ရပါမယ်။ ဒီအဆင့်ကလည်း သိပ်မကြာပါဘူး။ သူ့အရှိန်ကုန်ရင် အလိုလိုတက်တာ ရပ်ဆိုင်းသွားပါတယ်။ ဒါပြီးရင် နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ လူနာက တဒင်္ဂအိပ်ပျော်သွားပြီးမှ ပြန်နိုးလာပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခါ ထပ်တက်ရင်လည်း ဒီဖြစ်စဉ်အတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါနဲ့တစ်ခါ ပြန်တက်တာ အချိန်ခြား တတ်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါထက် ပိုတက်တတ်ပြီးရင်တော့ ထပ်ပြန်တလဲလဲတက်ဖို့များပါတယ်။
အချိ့ဆက်တိုက်တက်တာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ (Status Epilepticus) ဆက်တိုက်တက်ရင်တော့ လူနာက အိပ်ပျော်သလိုဖြစ်ရာက နိုးခါနီးမှာ နောက်ထပ်တစ်ခါတက်တာကြောင့် အတက်တွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်သွားတတ် ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက် အရေးပေါ်အနေနဲ့ အထူးကြပ်မတ်ခန်း (ICU) မှာ ထားပြီး ကုရန် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
တက်တာရဲ့ အခြေခံဖြစ်စဉ်တွေသိရပြီးပြီဆိုတော့ ဘာကြောင့်ဒီအတက်ရောဂါ ဖြစ်ရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်း ရင်းခံ (Causes) တွေကို အနည်းငယ် ရှင်းပြလိုပါတယ်။ ဦးနှောက်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ (Birth injury) ရခဲ့ရင်လည်း အတက်ရောဂါ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာတော့ အများအားဖြင့် လေဖြတ်ဖူးရင် တက်တတ်ပါတယ်။ အခြား အကြောင်းအရာတွေ ကတော့ ဦးနှောက်မှာ အကျိတ်ရှိခြင်း (Brain tumor)၊ အိပ်ဆေးစွဲသူများ၊ အရက်စွဲသူများ (Alcoholism) အထူးသဖြင့် အရက်ဖြတ်စဉ် တက်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပိုးကြောင့် ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းနေရင်လည်း တက်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ရေယုန်ပိုး (Herpes Encephalitis)၊ တီဘီရောဂါ၊ ခုခံအားနည်းတဲ့ HIV/AIDS ရောဂါနဲ့ အခြားပိုးတွေကြောင့်လည်း တက်တတ်ပါတယ်။ သွေးထဲမှာ သကြားဓာတ်နည်းတာ (Hypoglycemia) ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သွေးချိုဓာတ်များတာ (Hyperglycemia) ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် တက်တတ်ပါတယ်။ ဆားအငန်ဓာတ်နည်းတာ၊ ကယ်လ်ဆီယမ် ထုံးဓာတ်နည်းတာ ကလည်း တက်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ် အဖျားကြီးလို့ တက်တတ်တဲ့သူ အချို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ဆက်ပြီး တက်တတ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ဗီဇကြောင့် တက်တတ်တာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေမှာတော့ ဘာရောဂါမှ အကောင်အထည် ရှာမတွေ့တတ်ပါဘူး။ ဒါကို Idiopathic or Primary epilepsy လို့ ခေါ်ပါတယ်။
တက်တဲ့လူနာတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုဆက်ပြီးကုရသလဲဆိုတော့ -
1) တက်နေစဉ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊
2) နောက်ထပ် မတက်အောင် ကာကွယ်ခြင်းနဲ့
3) အကြောင်းရင်းရှာဖွေပြီး ဖယ်ရှားလို့ရလျှင် ဖယ်ရှားခြင်းဆိုတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သုံးခုနဲ့ ကုကြပါတယ်။
အတက်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေထဲက ထူခြားပြီး မှတ်သားဖွယ်ကောင်းတဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ရပုံလေးကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
တက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးလူနာတစ်ဦး ရောက်ရှိကြောင်းကို အရေးပေါ်ကိစ္စတစ်ရပ် (Emergency case) အဖြစ် လက်ထောက်အထူးကုဆရာ၀န် ဒေါက်တာတင်တင်က အကြောင်းကြားလာပါတယ်။
ပထမအဆင့် ရောဂါရာဇ၀င် (History Taking)
၅၂ နှစ် အမျိုးသမီးလူနာအသစ်တစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ် မမ။ အိမ်မှာ တက်နေတာ တစ်နေ့တည်းမှာ ၂ ကြိမ်ရှိသွားလို့ ဆေးရုံတက်လာပါတယ်။
ဟင် ….. အခုရော တက်နေတုန်းပဲလား၊ အတက် ရပ်သွားပြီလား။
အခုတော့ မတက်တော့ပါဘူး။ သူ့ကို အတက်ရပ်အောင်ဆိုပြီး အိမ်သားတွေက ခြေမ၊ လက်မတွေ ချိုးလိုက်တာ ခြေမကြီး ရောင်ကိုင်းနေတာ တွေ့ရတယ်။ လူနာကတော့ မှိန်းနေတုန်းပဲ။
(တက်တတ်တဲ့လူတိုင်း အတက်ပြီးရင် အလိုလို ရပ်သွားမှာပဲ။ သူတို့ ခြေမကိုချိုးလိုက်မှရပ်သွားတာ မဟုတ်ကြောင်း စာဖတ်သူများအား အသိပေးလိုပါတယ်။ တက်နေတုန်းမှာ လူနာက သတိမရှိလို့ ခန္ဓာကိုယ် ထိခိုက် ဒဏ်ရာမရအောင်၊ ဥပမာ - အမြင့်တစ်ခုခုမှ ပြုတ်ကျပြီး ဒဏ်ရာမရအောင် ထိန်းထားဖို့လိုပါတယ်။ တက်နေစဉ် ဖိထားခြင်း၊ ဖမ်းချုပ်ထားခြင်း မလုပ်ရပါဘူး။ အတက်ကျတာနဲ့ လူနာကို အသက်ရှူလမ်းကြောင်း လျှာရည်တွေနဲ့ ပိတ်ဆို့မသွားအောင် ဘေးစောင်း သို့မဟုတ် အနည်းငယ် မှောက်ခုံအနေအထားမှာ ပြုပြင်ပေးဖို့က ပိုအရေးကြီးပါကြောင်း ဗဟုသုတအဖြစ် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။)
ဒါဆိုရင် သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ် (History taking) တွေ မေးမြန်းပြီးပြီလား။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ သူ့ဖြစ်စဉ်က ဒီလိုပါ မမ။ ၁၀ နှစ် အရင်ကတည်းက သူတက်တတ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဖျားရင်တက်တာ၊ ဦးခေါင်းမှာ ဒဏ်ရာရခဲ့တာလည်း မရှိခဲ့ဖူးဘူး။ သူ့မိဘမျိုးရိုးမှာလည်း အတက်ရောဂါမရှိဘူး။ စဖြစ်ခါစကတော့ ခေါင်းတော်တော် ကိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုတော့လည်း ခေါင်းသိပ်မကိုက်တော့ဘူး။ ခုတစ်လော ဖျားတာလည်း မရှိဖူးဘူး။ သွေးတိုး၊ ဆီးချိုနဲ့ လေဖြတ်တာလည်း မရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ဒီ ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာတော့ (Antiepileptic drugs) အတက်ကာကွယ်တဲ့ သောက်ဆေးတွေနဲ့ ထိန်းထားတာ။ တစ်နှစ်ကို ၂ ခါလောက်ပဲ တက်တတ်တယ်။
Primary Idiopathic Epilepsy ဟာ ငယ်စဉ်မှ စဖြစ်တာများပေမဲ့ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာမဆို စဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ ဒီအမျိုးသမီးစတက်တာက အသက် ၄၀ လောက်အရွယ်မှာဆိုတော့ မျိုးရိုးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ အတက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်တာထက် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ဖြစ်တာကို အရင်ဦးစားပေး စဉ်းစားရပါမယ်။ ဦးနှောက်ကို ဒဏ်မရှိဘူး၊ လေလည်း မဖြတ်ဖူးဘူး၊ အကျိတ်ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာ ဥပမာ - ခေါင်းအမြဲကိုက်တာ မရှိဘူး။ အဖျားရောဂါပိုးတွေ ဥပမာ - HIV ခုခံအားနည်းရောဂါ၊ TB meningitis တီဘီပိုးကြောင့် ဦးနှောက်အမှေးရောင်ဖူးတာလည်း မရှိပြန်ဘူး။ အကြောင်းရှာမတွေ့တော့ (primary epilepsy) မွေးရာပါ မျိုးရိုးကြောင့်ပဲလားလို့ ထင်ရပါတယ်။
အင်း … ဒါဆိုရင် သူ့အတက်ရောဂါက အကြောင်းရင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိသလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ အရင်က ဆေးကုဖူးတဲ့ရာဇ၀င်က ဘယ်လိုရှိသလဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က ခေါင်းကိုက်ပြီး တက်တော့ ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်အထူးကုတွေနဲ့တော့ ပြဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဦးနှောက်ကို (CT) ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် ရိုက်လိုက်တော့ Hydrocephalus (ဦးနှောက်အတွင်းနဲ့ အပြင်ယံမှာ လှည့်ပတ်စီးဆင်းနေတဲ့ CSF အရည်လမ်းကြောင်းတစ်နေရာမှာ ပိတ်ဆို့နေလို့ ဦးနှောက်ရဲ့အတွင်းခန်းမှာ အရည်တွေ ပြည့်ဖောင်းလာတဲ့ရောဂါ) ဖြစ်နေတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဦးခေါင်းခွံအတွင်းမှာ အရည်တွေသိပ်များလို့ ခေါင်းသိပ်ကိုက်တယ်၊ တက်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် Venticulo peritoneal shunt ထည့်လိုက်တော့ သက်သာသွားပါတယ်။
(မှတ်ချက် ။ ။ VP shunt ဆိုတာက ပိုက်ငယ်လေးတစ်ခု တပ်ဆင်ပေးခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်၏ Verticle မှ ပိုနေတဲ့ အရည်တွေကို ဗိုက်ရဲ့ကိုယ်တွင်းခေါင်း (Peritoneum) ဆီသို့ ပို့ပေးတဲ့ကုထုံး)
အဲဒါဆို ဘာကြောင့် ဒီလို (CSF Pathway) လမ်းကြောင်းပိတ်ပြီး (Hydrocephalus) ဖြစ်သွားတာလည်း မသိခဲ့ဘူးလား။ အခုထိ ဒီ shunt (ဆက်သွယ်ထားတဲ့ပိုက်) ရှိနေတုန်းပဲလား။
သူ့ဆေးစာထဲမှာတော့ ဒီ shunt (ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ပိုက်)ကို ၃ လကြာမှ ပြန်ထုတ်လိုက်ရပါတယ်။ ပိုး၀င်လို့ ထုတ်လိုက်ရတာလို့ လူနာကပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ shunt ပြန်ထုတ်လိုက်ရပေမဲ့ ခေါင်းပြန်မကိုက်တော့ဘဲ ခုထိ ဒီပြဿနာမရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ (epilepsy) တက်တာက ဆက်ရှိနေလို့ အတက်တားဆီးတဲ့ဆေး Sodium Valproate (Encorate) 200 mg ကို တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် သောက်နေပါတယ်။ ဆေးကိုလည်း အမြဲမှန်မှန် သောက်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အရင်က ကောင်းသွားပြီးထင်လို့ ဆေးရပ်ကြည့်တာ ပြန်ပြန်ဖြစ်နေလို့ ခုထိဆက်တိုက်ဒီဆေးကို သောက်နေတာ ဆယ်နှစ်ရှိနေပါပြီ။
ဒါဆိုရင်တော့ သူ Primary epilepsy (အကြောင်းရင်းမတွေ့ရှိတဲ့ အတက်ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်က ဦးနှောက်မှာ CSF အရည်လမ်းကြောင်း ပိတ်ဖူးတာက ဘာကြောင်းလဲ။ ဒါက အကြောင်းရင်းရှိတဲ့ (Secondary epilepsy) ပုံနဲ့လည်း တူနေပြန်ရော။ ဒါဆို ဒီတစ်ခေါက်မတက်တော့လို့ ဆေးရုံချက်ချင်း မဆင်းစေနဲ့ဦး။
ဒုတိယအဆင့် ခန္ဓာကိုယ်စမ်းသပ်ခြင်း (Physical examination)
သူ့ကို သေချာစွာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေမဲ့ ထူးထူးခြားခြား မတွေ့ရပါဘူး။ ပကတိ လူကောင်းလိုပါပဲ။ (Neurological deficit) အာရုံကြောမကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာ မတွေ့ရပါဘူး။
တတိယအဆင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရှာဖွေခြင်း (Investigation)
အကြောင်းရင်းရှာကြည့်ဖို့ ထပ်စစ်ဆေးတာ လုပ်ရဦးမယ်။ ဘာတွေ စစ်ဆေးဖို့ စီစဉ်ထားလဲ။
သူ့ကို ကျွန်မတို့ အခြေခံသွေးတွေ စစ်ထားပါတယ် (Basic investigations)၊ CP (သွေးဥတွေ စစ်ဆေးခြင်း)၊ ESR (သွေးအနယ်ထိုင်နှုန်း) U & E (ကျောက်ကပ်နှင့် သွေးတွင်းဆားနှင့် ဓာတ်ဆားအခြေအနေ) စစ်တာ အဖြေတွေ အားလုံး ကောင်းပါတယ်။ ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန် (Chest X’ray) ရိုက်တာ အဆုတ်နဲ့ နှလုံးတွေကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြားနေရာ တွေမှာ (Calcified Spots) ထုံးဓာတ်၀င်နေတဲ့အစက်လေးတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်။ ဘာကြောင့် မှန်းတော့ မသိပါဘူး။ ဗိုက်ကို ရိုက်တဲ့တယ်လီဗေးရှင်းဓာတ်မှန် (Ultrasond abdomen) ရိုက်တာလည်း ဘာမှမထူးခြားဘူး။ အခု ဦးနှောက်ကို ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် (CT Brain) ရိုက်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
CT Brain ဦးနှောက်ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် ရရှိလာတော့ ထူးခြားမှုတွေ တွေ့ရပါတော့တယ်။ Calcified spots ထုံးဓာတ်အနည်ကျထားလို့ ထင်ရှားစွာပေါ်လွင်နေတဲ့ အစက်အပြောင်ပေါင်းများစွာ ဦးနှောက်အနှံ့မှာ တွေ့နေရပါတယ်။ ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန် (Chest X-ray) မှာတွေ့ရတဲ့ အစက်တွေကလည်း ကြွက်သားကြားထဲမှာ ၀င်နေတဲ့ Calcified Spots တွေပဲဖြစ်လို့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုတည်းသာ ဖြစ်မှာပါပဲ။
ဒါက Neurocysticercosis နဲ့ တူနေတယ်။ သူ ၀က်သားတွေ မကျက်တကျက်စားတာရှိသလား။ သူ့အလုပ်အကိုင်က ဘာလဲ။
သူ့အလုပ်က ၀က်သားရောင်းတာပါ မမ။ ၀က်ကို ၀က်သားချဉ်လုပ်စားတာ၊ မကျက်တကျက် စားတာတော့ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အေး …. ဒါဆို သူ Pork Tape worm infestation တုတ်ပြားကောင်ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေတာပဲ။ ဒီတုတ်ပြား ကောင် Taenia solium ခေါ် Tapeworm ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါက ၀က်သားထဲမှာပါတဲ့ တုတ်ပြားကောင် သားလောင်းတွေကို စားမိလို့ဖြစ်တာ။ ၀က်သားထဲမှာ တုတ်ပြားသားလောင်းကောင်လေးတွေဟာ အရည်အိတ်လေးတွေအဖြစ်နဲ့ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အူထဲရောက်တော့ တုတ်ပြားအကောင်ကြီး ဖြစ်လာတယ်။ အူထဲမှာပဲ နေတာဆိုတော့ အူမှာပဲ ဒုက္ခပေးလေ့ရှိတယ်။ အစာမကြေတာ၊ ဗိုက်နာတာ၊ မစင်ထဲမှာ တုတ်ပြားကောင်အပိုင်း အဖြတ်တွေ ပါလာတာ ရှိတတ်တာပဲများတယ်။ အခုလို လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်တွေထဲရောက်တာမျိုး ဖြစ်လေ့မရှိဘူး။ ပုံမှန်မတူဘဲ တစ်ခါတစ်ရံ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရလဲသိရင် ပြောပါဦး။
ကျွန်မမှတ်မိသလောက် ပြောရရင်တော့ ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာ နှစ်လမ်းရှိပါတယ် မမ။ တစ်လမ်းကတော့ ဒီလိုပါ။ အူထဲမှာ တုတ်ပြားကောင်ရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ မစင်ထဲမှာ တုတ်ပြားကောင်ရဲ့ ဥလေးတွေပါလာတတ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းမရှိဘဲ စွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ မစင်က တုတ်ပြားဥတွေဟာ သန့်ရှင်းအောင် လက်မဆေးတဲ့သူရဲ့ လက်ကတစ်ဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မသန့်တဲ့ ရေ၊ မသန့်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်က တစ်ဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစားအစာထဲမှာ ပါသွားတတ်ပါတယ်။ (မစင်ကို မြေသြဇာအဖြစ် သုံးစွဲပါကလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။) စားမိတဲ့ဥလေးတွေက သားလောင်းကောင်လေးတွေ ပေါက်လာမယ်။ ဒီသားလောင်းလေး (young form) အဆင့်က အူထဲမှာ အကြီးကောင်တိုက်ရိုက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ၀က်မှာလိုပဲ သွေးကြောထဲကို ၀င်သွားပြီး သွေးထဲကနေတစ်ဆင့် ဦးနှောက်အပါအ၀င် ကြွက်သားတွေ၊ အခြားကလီဆာတွေထဲ ရောက်ကုန်ပြီး အရည်အိတ် (Cyst) တွေ အတွင်းထဲမှာ ၀င်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Neurocysticercosis ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၀က်တွေကသာ တုတ်ပြားဥ စားမိပြီး သားလောင်းတွေ ၀က်အသားထဲမှာ (cyst) အရည်အိတ်လေးတွေ အဖြစ်နဲ့ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် လူက ၀က်နေရာမှာ ၀င်ယူနေမိတဲ့အဖြစ်မျိုး လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းက လူရဲ့အူထဲမှာရှိတဲ့ တုတ်ပြားအကြီးကောင်တွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်းမှာ အဆစ်ပေါင်းများစွာရှိ ပါတယ်။ အဆစ်တစ်ဆစ်စီမှာ ဥတွေအများကြီးပါပါတယ်။ ဥပါတဲ့ အဆစ်လေးတွေပြတ်ထွက်ပြီး အချို့အစာအိမ်ထဲ လေတက်ပြီး ပြန်၀င်သွားရင် မစင်ကတစ်ဆင့် တုတ်ပြားဥ စားမိတာနဲ့ တူသွားပါတယ်။
ဒီလို (calcified cyst) ထုံးဓာတ်ကျနေတဲ့ အရည်အိတ်တွေ နောက်ထပ် ဘယ်နေရာမှာရှိသေးလဲဆိုတာ ရှာကြည့်ရမယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ မမ။ သူ့ဗိုက်ကြွက်သားနဲ့ ပေါင်ကြွက်သားတွေကိုလည်း ဓာတ်မှန်ရိုက်ထားပါတယ်။ ကြွက်သားတွေမှာလည်း ထုံးဓာတ်ကျနေတဲ့ အရည်အိတ် (calcified cyst) တွေ အများကြီး စီတန်းပြီးတွေ့ရပါတယ်။
ဒါဆိုရင် သူ့ရဲ့အတက်ရောဂါရဲ့ အကြောင်းရင်းက (Neurocysticercosis) ဦးနှောက်မှာတုတ်ပြားကောင်ရဲ့ သားလောင်းတွေ၀င်ပြီး အရည်အိတ်တည်တဲ့ရောဂါပဲပေ့ါ။ သူ့ကို ဘယ်လိုဆက်ပြီးကုရင်ကောင်းမလဲ။
သူ့ကို သန်ချဆေးကြွေးပါမယ်။ Albendazole သန်းချဆေးနဲ့ steroid တွဲပြီးပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဗိုက်ထဲက တုတ်ပြားကောင် (Tapeworm) ကိုလည်း ချပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်။ အတက်ကာကွယ်ဆေး Sodium Valproate ကိုလည်း မပြတ်မှန်မှန်သောက်ဖို့ သတိပေးပါမယ်။
1) အတက်ရောဂါသည် အကြောင်းရင်းခံတစ်ခုခုကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်လို့ ဒီအကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
2) အကြေင်းရင်း (causes) တွေက ထင်ထင်ရှားရှားရှိတတ်ပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ ရှာရှာဖွေဖွေဖော်ထုတ်ရတတ်ပါတယ်။
3) Taenia Solium လို့ခေါ်တဲ ၀က်တုတ်ပြားကောင်ဟာ ၀က်သားမှာပါလို့ စားမိရင် အူထဲမှာအကြီးကောင်ရှိတာ ဒုက္ခ သိပ်မပေးပေမဲ့ တုတ်ပြားကောင်ရဲ့ ဥတွေကို တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၊ အစားအသောက် သန့်ရှင်းမှုမရှိလို့စားမိရင် တုတ်ပြားရဲ့ သားလောင်းကောင်လေးများ ဦးနှောက်အပါအ၀င် ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိပြီး cyst အရည်အိတ်တည်ပါက Neurocysticercosis ရောဂါဖြစ်ပြီး အတက်ရောဂါဖြစ်စေတတ်ကြောင်း အသိပညာပေးအပ်ပါတယ်။
No. 240, January 2015